Omunye imifino ethandwa kakhulu, okuyinto kangaka uyakuthanda balimi yasekhaya ulime, kuyinto ikhukhamba. It has ongaphakeme umsoco kanye nokuqukethwe elincane amavithamini. Nokho, ukunambitheka omuhle ikhukhamba, ngokuhlanganiswa ezahlukene zokusebenza wakuvumela ukuba zithole popularization yemifino omkhulu.
Izizathu "uthando zabantu"
Lokhu okusemathinini yemifino izitshalo - kulolo ketshezi usawoti, isetshenziswa in salads. Ukhukhamba nomphumela omuhle kakhulu umzimba womuntu: bona wehlise asidi of ijusi esiswini, ukukhuthaza digestibility lula ukudla, ngaphandle wusizo rheumatism, isifo sikashukela, isifo sezinso futhi isibindi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kwezitshalo yemifino amumethe iodine. Ngaphezu kwalokho, futhi sikhule akunzima, into esemqoka ukuba bagcine izimfuneko agronomic, bese lezi zipho oluhlaza ezinoshukela bemvelo uyohlale ekhona etafuleni - kokubili fresh futhi ifomu kusetshenzwe.
Izimpawu izinhlobo kanye nzalo
Kukhona izinhlobonhlobo eziningi yamakhukhamba. Ziyahlukahluka kuye kokubili ezidlula Zelentsy futhi tuberosity yayo. izinhlobo ezehlukene ehlukene ukumelana nezifo, izinhlobo kakhulu izimbali kanye yokuvuthwa nezikhathi. Izinhlobonhlobo futhi kuhluke degree of recyclability, ezithela, ukuqhuma eside ngisho cleat Umbala.
Ngo inqubo impova ngamasiko yemifino is ikakhulukazi ohanjelwa izinyosi. Baba ngokwabo izinhlobo ezifana kukhona endawni endle njengoba Semkross F1, Othello F1, Zhuravlenok F1, Farmer F1, isithupha, futhi ikhukhamba Libelle F1. Self-impova zenyathi izitshalo yemifino - a partenokarpnyh subclass. Kuhlanganisa eLapland F1, Pasalimo F1 futhi F1 Blizzard, isiphepho esikhulu seqhwa, kanye Petersburg Express F1, Crispina F1, F1 Red mullet ngisho Tom Thumb F1. Iningi lazo - kuthiwa nzalo etholakala esanda kutholakala futhi ezingasetshenziswa ukuhlakulela zokugcina. Noma kunjalo, izinhlobonhlobo ongaphandle ethandwa kakhulu kuyinto ikhukhamba Libelle F1.
Isiko kungokwalabo esigabeni ka nzalo pcheloopyljaemogo. Anakho isivuno sezingeni eliphezulu. Izithelo abe ukuma kahle ribbed. umbala shades yamakhukhamba ziyahlukahluka kusuka medium oluhlaza ezijulile-emnyama. Ngakho ukunambitheka, okuyinto libhekene hybrid sezingeni eliphezulu, awayona ukufutheka ichithekile.
Izithelo isikhathi eside ukutshalwa efanele ifinyelela amasentimitha nane ngesikhathi isisindo afinyelela ku ngayikhulu namashumi ayisihlanu amagremu. Inzuzo main, okuyinto libhekene F1 ikhukhamba Libelle, incazelo ezihlukahlukene ephinde kubonisa plus ukuntuleka izindawo kanye ukumelana lenyuka ukuze powdery isikhutha. Lokhu yemifino efanayo kunambitheka efana esanda kukhiwa, futhi ifomu kusetshenzwe. Ngaphezu kwalokho, ikhukhamba Libelle le F1, njengoba Ephakathi-hybrid, senzelwe ukutshala ekhanyayo, noma ezikhulayo zokugcina.
Izimfanelo ekilasini impova izinyosi ukwaluka eside futhi ngezinga isilinganiso ripeness, futhi ukuzinza fruiting. Isithelo, onikeza F1 ikhukhamba Libelle, ubukeka ufana kakhulu uthi lokuphotha. Iqukethe inani okungenani imiphetho, futhi kuyamjabulisa ukubonakala kwakhe nje kuphela, kodwa futhi ukunambitheka esiyingqayizivele.
Ikhukhamba Libelle le F1, ukubuyekezwa zazo ifakazela ithandwa enkulu yalesi hybrid, iqala ukuthela izithelo akukho ngaphambi kosuku wamashumi ayisihlanu ngemuva kosuku ukuvela emhlabathini. Nothile Kuveza grade impela high: isifinyelele abafinyelela kwabayishumi amakhilogremu ngamunye imitha square ngayinye.
Njengabo bonke abanye imifino, ikhukhamba Libelle le F1, ngokunakekela izibuyekezo bathi yena uthanda ukukhanya, umswakama nokufudumala, inohlelo impande kabi athuthukile. Kodwa ingxenye elingaphezu kwawo phansi, inobungako elikhulu. Ukuze ukukhula okuhle kanye nentuthuko efanele zalesi sihlahla idinga lokushisa umbuso ezilandelayo: emoyeni - 25-27, nomhlabathi - 20-22 degrees.
Ukuvela izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba izifo ngokuvamile iqala lapho ngesikhashana eside igcinwe ngesilinganiso aphansi. Esimeni lapho isimo sezulu liyana futhi impela isikhathi eside yisilinganiso lokushisa desyatigradusny, yemifino kwezitshalo iqala ukuba decelerate ekuthuthukiseni, ngaphezu kwalokho, okunqumayo kule icala futhi kuyoba sokuvuna, okuyinto uzokunika ikhukhamba Libelle F1. Izimpendulo ezivela kulabo Sekuyisikhathi eside ezikhulayo emasimini abo lokhu hybrid kubonisa ukuthi ukushisa high, isibonelo, at 35 ° C, kokukhulelwa ngeke kwenzeke.
Lokhu izinhlobo sekwephuzile-yokuvuthwa libhekene dlinnopletistyu kanye nohlobo besifazane izimbali. Zelentsy yakhe zone phakathi ezweni lethu akhule nesikhombisa amasentimitha ubude nesisindo 70 kuya kwangu-90 grams. Ukuze uthuthukise impova nezithelo simiselwe imbewu ngaphambi kokuhlwanyela izazi hybrid ukuncoma ukuxubanisa nokutshala impahla yanoma yimuphi grade-wempova ngesilinganiso amaphesenti ayishumi of isisindo ingqikithi imbewu ivolumu.
Ikhukhamba Libelle le F1, ukutshala okubandakanya ulwazi oluthile agronomic, uthanda umswakama, futhi, njengoba enhlabathini bese emoyeni. Imifula yakhona lezihlahla is kahle, ngakho ukuhwamuka kwamanzi okwenzeka uye wakwenza ngokuzimisela okukhulu. Isihluthulelo isivuno high, ngokusho kongoti, endaweni yokuqala ukuthambisa njalo, nomhlabathi ukufudumala omuhle.
Okunhlobonhlobo itshalwe Libelle F1 ikhukhamba isidingo emhlabathini, a humus ocebile kanye kokuba ngezinga eliphezulu lokuzala. Hhayi ukubaluleka zokugcina ngenani lokuvuna ukulungiselela umhlabathi ngaphambi betshala kanye izinga imbewu. Ngokusho abalimi, lokhu kuyinto enhle zokutshala impahla ebeligciniwe iminyaka emithathu noma emine.
Vysokoplodorodnaya likhanyelwe inhlabathi ongaphakeme nitrogen okuqukethwe, kanye liming nenhlabathi azibukhali kakhulu - lawa izidingo eziyisisekelo ezisebenza ezweni lapho ukukhula ikhukhamba Libelle F1.
Abaningi abalimi abanolwazi ku iziza zabo okwesikhathi eside wakubeka ngale hybrid. Ezinye zazo wakhetha kule inhlobo yokuqala, futhi sekungamashumi eminyaka njalo likhule kuphela ikhukhamba izinhlobo Libelle. Isizathu ukuthandwa ukuthi bakwazi kahle ngokufanayo ingasetshenziswa kokubili ukusetshenziswa fresh and salads noma ukulondolozwa. Nokho, nahlulele by ukubuyekezwa, ngezinye izikhathi ukhukhamba lokuqala eqoqwe elalivela esihlahleni, Lingase lizwakale ezibabayo, kodwa ehlobo eyomile kuphela, ngakho kule sezulu, ukuthambisa kufanele kwenziwe njalo ngobuningi. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo bathambekele phezu-ukuphambana, okuyinto ejwayelekile lapho sokuvuna kwenzekani isikhathi.
Abantu abaningi, nahlulele by ukubuyekezwa, watshala ukhukhamba Libelle e ekhanyayo ekuqaleni kuka May futhi imbewu ziqhume kahle noma entwasahlobo yesithwathwa ayikwazanga ukubhubhisa izitshalo, indawo yokuhlala imibhede spandbonom, ngokubeka le nto ngokukhululekile emhlabathini, hhayi edonsa. Ezinye okujula opylyaemosti sesitshalo ikhukhamba Libelle F1 zikhuliswa ngamanzi "fontanelle F1».
On eshiya black izindawo rose: yini okufanele uyenze futhi indlela yokuphatha?
Dmitry Borisov: Biography futhi ukuphila siqu (izithombe)